Ihe ngosi Redmi Rịba ama 8 karịrị nkeji nde 30 rere | Gam akporosis
Ihe ngosi Redmi Rịba ama 8 gafere nde iri atọ erere n'ụwa niile
Ndị na-amaghị ma ọ bụ nụla usoro Redmi Rịba ama ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ ha bụ n'ihi na ewepụrụ ya na usoro teknụzụ. Nke a dị n'ahịa ruo ọtụtụ afọ (ọ malitere dị ka usoro Xiaomi), ma rutewokwa ihe ijuanya na-ewu ewu karịsịa ebe ọ bụ na akara ngosi 7, nke gosipụtara na Redmi dị ka akara aka onwe ya.
Modelsdị ndị kachasị ere nke ezinụlọ a nke smartphones bụ Cheta 8, nke wepụtara na August nke afọ gara aga. Eresịla ngwaọrụ ndị a ihe karịrị ugboro nde iri atọ gburugburu ụwa, ihe ndị nrụpụta China nwere etu ọnụ site n'ụdị mgbasa ozi.
Na ajụjụ, ọ bụ Lu Weibing, osote onye isi Xiaomi, onye isi oche nke Xiaomi China na onye isi nchịkwa nke Redmi, onye na-ahụ maka ịkpọsa awa ole na ole gara aga na ngwaọrụ dị n'etiti usoro Redmi Note 8 nke ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala ahịa. ndekọ, karịrị ọ bụghị na umeala 30 nde akara n'ụwa nile, nke ara bu ihe ara.
N'aka nke ọzọ, ekpughere ya usoro a, na ọnwa mbu erere ya, jisiri ike weghara ọnụ ọgụgụ nke otu nde nkeji. N'ime ọnwa abụọ ọ na-anya isi banyere nde mmadụ ise rere, nke malitere akara ya nnukwu ewu ewu n'etiti ndị ọrụ.
Ihe akwụsịghị ebe ahụ. N’ọnwa nke atọ ọ chịkọtara ọnụ ọgụgụ nke 10 nde. O were usoro Redmi Note 7 ihe dị ka ọnwa ise iji ruo ọnụ ọgụgụ ahụ, ọ bara uru iburu n'uche. Ajụjụ dị ugbu a bụ: ọ ga - eme ugbu a Redmi Rịba ama 9 usoro egwuregwu ma / ma ọ bụ gafere nọmba ndị a? Anyị ga-amata azịza ya ma emechaa.
Ere ahia nke Redmi Rịba ama 8 usoro
Nkwupụta a sitere n'aka onye isi dara nke ọma na ahịa ahịa ma bulie uru nke mbak Xiaomi, nke pụtara ìhè nke ọma. Obi ike nke ụlọ ọrụ ahụ na-eweta na ndị na-etinye ego ya dị ukwuu, ọbụlagodi n'etiti ọnọdụ nbelata akụ na ụba ụwa nke ugbu a na-enweta site na coronavirus.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ngosi Redmi Rịba ama 8 gafere nde iri atọ erere n'ụwa niile
Agbụrụ, nakọta ma melite ụgbọ ala ndị ama ama na Microsoft ọhụrụ Forza Street
Huawei Na-ewebata Y5P na Y6P Ekwentị n'akụkụ MatePad T8 Mbadamba ụrọ